ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း Police Of Their Secret Agents)တွေနဲ့ ဂျပန်သတင်းပေးတွေကြားထဲက အခုလို တိုက်ခိုက် နိုင်တာဟာ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့
Taqwacore taqwacore ဟူသော ဝေါဟာရကို အသုံးပြုထားသော ပထမဆုံးတီးဝိုင်းများမှာ The Kominas, Vote Hezbollaz နှင့် Sagg Taqwacore Syndicate တို့ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်ထဲတွင် ပါရှိသော အခြားတီးဝိုင်းများမှာ Secret Trial Five, Fedayeen, Sarmust နှင့် SG-Record မှ အခြား တီးဝိုင်းများပါရှိသည်။
Taqwacore The all-girl punk တီးဝိုင်း Secret Trial Five ရေးထားသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်သည် taqwacore ဟူသော စကားရပ်ဝေါဟာရမှ သူတို့၏ အမှန်တရားဆီသို့ စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်စေသည်။ ခေါင်းစဉ်မှာ "We’re not Taqwacore" ဟု အမည်ရသည်။ taqwacore လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ သူတို့စာသားမှာ လျော်ကန်သော်လည်း သူတို့ဖျော်ဖြေနေစဉ် အဆဲခံချင်လည်း ခံရနိုင်သည်။ သူတို့၏စာသားများမှာ
ယုစန်ဂျေ စန်ဂျေဟုလည်း အလွယ်သိကြသော ယုစန်ဂျေသည် ၁၉၉၅ မေ ၂ တွင် မွေးပြီး တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်နှင့် အစီအစဉ်ကြေငြာသူ ဖြစ်သည်။ BtoB အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်သည့်အပြင် ဇာတ်လမ်းတွဲများ ဖြစ်သော Plus Nine Boys(၂၀၁၄)၊ Who are you: School 2015 (၂၀၁၅)၊ The Village: Achiara's Secret (၂၀၁၅)တွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် လူသိများသည်။
Taqwacore တီးခတ်ခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ရှင်တွင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချိန်တွင် ငယ်ရွယ်သော ပရိတ်သတ်များသည် ပထမတွင် စိတ်ရှုပ်နေကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တီးဝိုင်းများအတွက် ကောင်းချီးဩဘာပေးခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော Secret Trial Five သည် စတိတ်စင်တွင် တီးခတ်စဉ်တွင် လုံခြုံရေးအား ခေါ်ယူခဲ့ပြီး အုပ်စုသည် အတင်းအကျပ်ခိုင်းခြင်းကို ခံရသည်။ ၎င်းမှာ ISNA ၏ အစဉ်အလာစည်းကမ်းဖြစ်သော "no-female singers အရဖြစ်သည်။ အဝတ်အစားများ စုတ်ပြတ်သတ်နေသော အုပ်စု အဆောက်အဦး၏ အပြင်ဘက်တွင် စုရုံးနေပြီး ဂီတာကို ကျောက်ခင်းလမ်းတွင် ရိုက်ချိုးခဲ့သည်။
ယုစန်ဂျေ မျက်နှာဖုံးအဆိုဘုရင်ဟု ခေါ်သော ဆန်းကြယ်ရသပေးစွမ်းသည့် တေးဂီတပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုကောင်းများ ရရှိခဲ့သည်။ မောတဲ့ပိတုန်းနာမည်ဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ရာ ပြိုင်ပွဲတတိယဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ The Village: Achiara's Secret လျှို့ဝှက်သဲဖိုဇာတ်လမ်းတွဲတွင် အမျိုးသားအဓိကဇာတ်ကောင် ပတ်ဝူးဂျေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Red Velvet's Joy နှင့်အတူ We Got Married အစစ်အမှန်ရှိုး၏ စတုတ္ထရာသီတွင် လံကြုပ်အိမ်ထောင်ရေးအစီအစဉ်တွင် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ၂၀၁၆ မေ ၇ ရှိုးပွဲအပြီးတွင် လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီး ရှိုးပွဲတလျှောက် အရှည်ကြာဆုံးနှင့် နာမည်အကျော်ကြားဆုံး စုံတွဲဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း In January 1962, General Edward Lansdale described plans to overthrow the Cuban Government inatop-secret report (partially declassified 1989), addressed to President Kennedy and officials involved with Operation Mongoose. CIA agents or "pathfinders" from the Special Activities Division were to be infiltrated into Cuba to carry out sabotage and organization, including radio broadcasts. In February 1962, the United States launched an embargo against Cuba, and Lansdale presenteda26-page, top-secret timetable for implementation of the overthrow of the Cuban Government, mandating that guerrilla operations begin in August and September, and in the first two weeks of October: "Open revolt and overthrow of the Communist regime".
Dream pop Slowdive,Ride) Sub Pop(Velocity Girl), Sarah Records (Secret Shine), Slumberland(Black Tambourine, Swirlies), Cherry Red(Blind Mr.Jones)နှင့် Vernon Yard တို့ဖြစ်ပြီး ဤအမျိုးအစားအတွက် အရေးပါသော မှတ်တမ်းများဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀တွင် George Harrisoinက All things Must Pass ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး album ၏ Wall of Sound ကို ဂီတသတင်းစာဆရာ John Bergstrom က dream pop တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။